के तपाईंसँग छ? गोपनीय प्रशंसक? सायद तपाईंले यो रोमान्टिक तीज गरिएको भिडियो स्लट मिसिनलाई कताई गरेर पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ Microgaming। र तपाईं आफ्नो एक साँचो प्रेम पत्ता छैन भने, त्यसपछि कम्तिमा तपाईंलाई राम्रो मौका 50,000 क्रेडिट को एक परम Jackpot संभावित केही winnings घर लिन संग हुनेछ। अब यो केहि छ कि हामी सजिलै संग प्रेम मा गिर जान सक्छ!
को 5-रील र 9-payline खेल punters रमाइलो गर्न को लागि एक राम्रो र सुखद दृश्य प्रदर्शन सिर्जना गर्न केही classy दुई-आयामी कार्टून प्रयोग गरेर Microgaming सफ्टवेयर देखि एक अपेक्षाकृत परम्परागत भेटी छ। निस्सन्देह, यो lovey-dovey खेल छैन चिया सबैको कप हुन केही इनामदायी अतिरिक्त गेमप्लेको धन्यवाद जाँदै छ, तर यो अझै पनि एक ठूलो दर्शक अपिल सक्छ तत्व, जंगली जीत र विशेष स्पैटर जीत संग मुक्त स्पिन सहित।
आफैलाई हेड ओभरले हेरी
यदि तपाईं सबै रोमान्टिक प्रेम गर्नुहुन्छ भने, तपाई माइक्रोगाइम द्वारा स्लट मिसिन द्वारा निराश हुन धेरै सम्भव छैन। यो कारणले गर्दा5रिल्स लापरवाहीको कला संग सम्बन्धित सबै प्रकारका ट्रिंकेटहरू भरिएका छन्, जसमा लाल गुलाब, पुरानो स्टाइल इत्र बोतलें, गुलाबका माछाहरू, हृदयमा आकार, कपिडको सिल्हुनेट छविको साथ बैंगनी गहने र एक हीरा सहित रिंग। आकर्षक लापरवाहीको अतिरिक्त तत्वको लागि पनि मास्केड मास्क छ।
निस्सन्देह, खेलाडी सबै भित्री प्रतिमा द्वारा बहकाएको छ कि चाहे आफ्नो आफ्नै व्यक्तिगत स्वाद मा निर्भर गर्दछ। किनकि आइपुगेको छ, सबैले हार्दिक रमाईलो रोमान्टिक छैन!
गोपनीय प्रशंसक अपडेट गरिएको: जनवरी 31, 2019 लेखक: आमिर Berrey
1 गोपनीय प्रशंसक
2.0.0.1 बाई शाई
2.0.0.3 सुन हुन्छ
2.0.0.4 ला कुकाचा
2.0.0.5 सैम समुद्र तटमा
2.0.0.7 डेजर्ट खज 2